वार्षिक चार लाख डलर आम्दानी हुने एक्चुरी नेपालमा नहुँदा करोडौं रुपैयाँ विदेशिँदै
अरुण सापकोटा सोमबार, कात्तिक १०, २०७७, १६:४७
काठमाडौं- विश्वकै उत्कृष्ट आम्दानीमा पर्ने एक्चुरी नेपालमा एक जना पनि नहुँदा वर्षेनी करोडौ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। नेपालमै एक्चुरी नहुँदा भारत लगायत अन्य विदेशी नागरिकमा भर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरुले समयमै साधारणसभा समेत गर्न सकिरहेका छैनन्। नियामक निकाय बीमा समिति समेत विदेशी एक्चुरीमा भर पर्नुपर्दा समयमै कम्पनीको वित्तीय विवरण पास गर्न सकिरहेको छैन।
विश्वकै पाँचौं उत्कृष्ट आम्दानीमा पर्ने एक्चुरीले बार्षिक तीनदेखि चार लाख डलरभन्दा धेरै आम्दानी गर्छन्। यतिधेरै आम्दानी हुने एक्चुरी भने विश्वमै एकदमै कम छन्। हाल नेपालमा भने एक जना पनि छैनन्। केही नेपालीले एक्चुरी उपाधि हासिल गरेका भए पनि उनीहरु नेपालमा छैनन्।
जीवन बीमाको वीमाङ्कीय मूल्यांकनका लागि एक्चुरीको आवश्यक पर्छ। बीमा लगायत र भविष्यको दायित्व मूल्यांकन गर्ने क्षेत्रमा एक्चुरीको आवश्यक पर्छ। नेपालमा बीमा समितिका अनुसार एक्चुरीको कार्य क्षेत्र बीमा, बैंकिङ, धितोपत्र, कोष व्यवस्थापन, प्राज्ञिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ।
एक्चुरी कुनै शैक्षिक योग्यताको पढाइ होइन। यो व्यावसायिक अनुमति प्राप्त पेशा हो। यसको अध्ययनको लागि कुनै विश्व विद्यालयमा गएर औपचारिक अध्ययन गर्नु पर्दैन। यसका निश्चित संस्थामा गएर तोकिएका परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। न्यूनतम प्लस टु पास गरेका तथा गणित पढेको हुनुपर्छ। गणित राम्रो नभएका विद्यार्थीले सामान्यतया यो कोर्ष पास गर्न सक्दैनन्। एक्चुरी पढ्नका लागि हुने प्रवेश परीक्षामै धेरै फेल हुन्छन्। त्यसैले गर्दा गणितमा सबैभन्दा धेरै राम्रो हुनु पर्छ।
कस्तो छ प्रवेश परीक्षा?
एक्चुरियल कमन इन्ट्रान्स टेस्ट (एसिइटी)मा भएको प्रवधानका आधारमा यसको प्रवेश परीक्षा अनलाइनबाट दिन पाइन्छ। यसको लागि तीन घण्टामा ७० प्रश्नको हल गर्नुपर्छ। यसका लागि तीन तहका प्रश्न तयार पारिएको हुन्छ। पहिलो तहमा ४५ वटा प्रश्न हुन्छन्। जसको प्रत्येक प्रश्न बराबर एक नम्वर गणना हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो तहमा २० वटा प्रश्न हुन्छन्। जसमा प्रत्येक प्रश्न बराबर २ नम्वरको हुन्छ। तेस्रोमा ५ वटा प्रश्न हुन्छन्। जसमा प्रत्येक प्रश्न बराबर ५ नम्बरको हुन्छ।
यसमा दुर्इ सेक्सनमा आधारित कोर्ष तयार पारिएको हुन्छ। पहिलो सेक्सनमा म्याथम्याटिक्स, स्ट्याटिक्स, डाटा इन्टरप्रिटेसन रहेका हुन्छन्। यस अन्तर्गतका प्रश्नको हल गरेर पास गर्न ५५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ। दोस्रो चरणमा अंग्रेजी तथा लजिकल रिजनिङ तर्फका प्रश्नमा पास गर्न ४५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ। दुवै तहको प्रश्न दिँदा पहिला सजिलो र पछि जटिल प्रश्न दिइन्छ।
सजिलोपछि जटिल प्रश्न दिने प्रावधान हुन्छ। जटिल मिलाउन नसकेमा लगत्तै सफ्टवेरले नै सजिला प्रश्न दिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। भारतको एक्चुरी सोसाइटी अफ इन्डियाले एउटा स्लटको लागि एक पटक प्रवेश परीक्षा लिने गरेको छ। सामान्यतया प्रत्येक वर्षको अप्रिल र सेप्टेम्बर महिनामा प्रवेश तथा अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गरिएका हुन्छन्।
प्रवेश परीक्षामा पास भएपछि के गर्नुपर्छ?
प्रवेश परीक्षा पास गरेपछि १५ वटा बिषय पास गर्नु पर्छ। एक पटकमा बढीमा तीन विषयको परीक्षा दिन पाइन्छ। यो आधारमा नियमित पास हुनेले ३ वर्षमा एक्चुरी उपाधि पाउन सक्छ तर यो उपाधि प्राप्त गर्न ५ देखि ७ बर्ष लाग्ने गरेको पाइन्छ।
यो उपाधिका लागि चार तहमा रहेको परीक्षा पास गर्नुपर्छ। यसका सिटी सेरिज, सिए सेरिज, स्पेसलिस्ट टेक्निकल स्टेज र स्पेसलिस्ट स्टेज रहेको हुन्छ। यसमा एउटा तह पास गरेपछि मात्र अर्को तहको परीक्षा दिन पाइन्छ भन्ने हुँदैन। परीक्षार्थीले परीक्षा दिन सक्ने भएमा कुनै पनि तहको परीक्षा दिन पाइन्छ। यसको पूरै परीक्षा पास गर्न कठिन हुने हुँदा सिटी ९ सम्मको परीक्षा पास गरेकाले पनि राम्रो रोजगारी पाउने गरेका छन्।
यसको अध्ययनको लागि अन्य डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियरको जस्तो धेरै खर्च लाग्दैन। यो विषय पढ्न अन्य विषयको जस्तो नियमित कलेजमा गएर पढ्नु पर्दैन। तर परीक्षाको तयारीको लागि भने ट्युसन पढ्न पाइन्छ। भारतमा एक्चुरी सक्न लगभग भारतीय दुर्इ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ। थप किताब तथा सन्दर्भ सामाग्री किन्नुपर्दा केही खर्च बढ्न सक्छ। नेपाली विद्यार्थीको हकमा भारत तथा अन्य देशमा पढेर मात्रै बस्नुपर्ने हुँदा खर्च धेरै लाग्छ सक्छ।
बीमा समितिले कुनै बेला यसको पढाइको लागि नेपालमा नै सेन्टर राख्ने प्रयास गरेको थियो। तर कोही पनि पढ्न नआएपछि समितिले कार्यक्रम नै स्थगित गरेको थियो। कुनै समयमा नेपालमा सिए पढ्ने हुँदैन थिए। यो पढ्न सकिँदैन भन्ने जमात धेरै थियो तर आजका दिनमा यसको अध्ययनमा आकर्षण बढेको छ। यस्तै आजका दिनमा एक्चुरीको पनि सिएको जस्तै भ्रम भएको विज्ञहरु बताउछन्। एक्चुरी अध्यनको लागि बीमा समितिले भारतमा पढ्न पठाए पनि कसैले पढ्न सकेनन्।
बीमा ऐन २०४९ को दफा २(ञ) का अनुसार, बीमांकी भन्नाले बीमा व्यवसायमा भएको दायित्वको निर्धारण तथा गणना गर्नका लागि बिमकद्वारा नियुक्त गरिएको तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
बीमा व्यवसायीले नेपालमा बीमा सम्बन्धी काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा विदेशबाट ल्याउनु परेको छ। बीमा कम्पनीले विदेशी कन्सल्ट्यान्ट मार्फत काम गरिरहेको छ। समितिले एक्चुरीको लागि बार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै कन्सल्ट्यान्टलार्इ बुझाउँदै आएको छ।
नेपालको हकमा एउटा बीमा कम्पनीमा काम गरेको एक्चुरीले अर्को बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउँदैन। तर जीवन बीमा कम्पनीमा एक्चुरी गर्नेले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउछन्।
अहिले बीमामा मात्र यसको अनिवार्य गरिएको भए पनि बिस्तारै बैंक तथा लामो समय दायित्व निर्वाह वहन गर्ने संस्थामा यो अनिवार्य हुदै जाने देखिन्छ। एनएफआरएस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि एक्चुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छन्। यसले गर्दा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि एक्चुरी गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता दीर्घकालीन कोषको ब्यबस्थापन गर्ने भएकाले यिनीहरुलाई पनि एक्चुरीको आवश्यकता पर्छ। नेपालमा एक जना पनि एक्चुरी नहुँदा विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण राष्ट्र बैंकले यसलाई अनिवार्य गर्न सकिरहेको छैन।
नेपालमा एक्चुरीको अभाव भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसको पढाइ सुरु गरेको छ। शैक्षिक रुपमा गणित विज्ञान स्कुलको रुपमा सुरु भए पनि यसको प्रमुख उद्देश्य एक्चुरीको उपाधि हासिल गराउनु नै हो। प्लस टु परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले यस स्कुलमा इन्ट्रान्स परीक्षा दिन सक्छन्। जम्मा ३६ जनाको कोटा रहेको यसमा पहिलो वर्ष कोटाभन्दा कम इन्ट्रान्स परीक्षामा सहभागी भएका थिए।
गत वर्षदेखि यस परिक्षाका लागि अत्याधिक आकर्षण देखिँदै आएको छ।
नेपालमा यो कोष पढ्दा चार वर्षमा चार लाख खर्च हुन्छ। एक्चुरी उपाधिका लागि भने भारत वा बेलायतको बोर्डमा परीक्षा दिनु पर्छ। गणित विज्ञान स्कुलले एक्चुरीको तयारी सँगसँगै गराउने गरेको छ। उक्त उपाधिका लागि आवश्यक पर्ने तयारी गराउने गरी शैक्षिक कोर्ष तयारी गरिएकोले केही वर्षमै नेपालबाट एक्चुरीको उत्पादन हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
उतार चढावबीच १६ अंकले बढ्यो नेप्से, ८ अर्ब ९० करोडको कारोबार सातामा कारोबारको पहिलो दिन आइतबार ५० अंकले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचकमा सोमबार पनि दोहोरो अंककोे वृद्धि देखिएको छ।... सोमबार, माघ १२, २०७७